နံနက်စာ Enchiladas (ရှေ့သို့လုပ်ပါ) - ချက်ပြုတ်နည်းများ
အာလူးကိုဘယ်လောက်ကြာကြာ ၃၅၀ ဖိုးစားရမလဲ
ဘလူးဘယ်ရီမုန့်ဒိန်ခဲ crepe ဖြည့်စာရွက်
နံနက်စာ enchiladas များသည်အပြည့်အဝတင်ထားသောမိတ်ကပ်နံနက်စာဖြစ်သည်။ သူတို့ကပျင်းရိတနင်္ဂနွေ, guests ည့်သည်များ, အားလပ်ရက်များအတွက်, ဒါမှမဟုတ် 'ညစာအတွက်နံနက်စာ' အဘို့အပြီးပြည့်စုံသော!
ဝက်သား (သို့မဟုတ်ဝက်အူချောင်း)၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်ဒိန်ခဲများကို tortillas များဖြင့်ပတ်။ ရာသီဥတုသာယာသည့်ဥနှင့်ရောနှောထားသည်။ တစ်ညလုံးအနားယူပြီးနောက်ပြီးပြည့်စုံသောမုန့်ညက်အတွက်အတူတကွမုန့်ဖုတ်သည်။
တစ်ခါတစ်ရံမနက်စာသည်နေ့တိုင်းတူညီသောအရာများနှင့်အတူထုံးစံအတိုင်းရရှိနိုင်ပြီးနံနက်စာပူစားခြင်းသည်အလုပ်များစွာနှင့်တူသည်။ ငါတို့သည်ဤမနက်စာ enchilada စာရွက်ကိုချစ်ဒါကြောင့်ပါပဲ။
လွယ်ကူပါတယ် မိတ်ကပ် ညာဘက်တစ်ပါတ်ကိုစတင်ရန်နံနက်စာ casserole! တနင်္ဂနွေနေ့လည်စာစားပွဲများအတွက်အလွန်ကောင်းသည်။
အသား Diced ဝက်ပေါင်ခြောက်ဤ enchiladas မှအလွန်ကြီးစွာသောဖြည့်စွက်သည်, ဒါပေမယ့်ဝက်အူချောင်းထည့်သွင်းဖို့အခမဲ့ခံစားရသည်, t ဘေကွန် အမဲသားဒါမှမဟုတ်ကြက်သား၊
သငျသညျပိုနှစ်သက်ချင်ပါတယ်လျှင်, ကစောင့်ရှောက်လော့ သက်သတ်လွတ် နှင့်အသားတုံးငရုတ်ကောင်းအပိုဟင်းသီးဟင်းရွက်ထည့်ပါ!
TORTILLAS သင်သည်ဂျုံမှုန့်သို့မဟုတ်ပြောင်းဖူး tortillas ကိုသုံးနိုင်သည်။ ငါလုပ်နေစဉ် ရိုးရာ enchiladas ပြောင်းဖူး tortillas နှင့်အတူ, ဒီစာရွက်ထဲမှာငါမုန့်ညက်ကြိုက်တတ်တဲ့။ သင်၏လိပ်ပြာကိုသင်လှိမ့်နေစဉ်ကွဲအက်ခြင်းမှကာကွယ်ရန် ဦး စွာနွေးရန်သတိရပါ။
ခေါင်မိုး မုန့်ဖုတ်ခြင်းမပြုမီခွဲထားသည့် cheddar ဒိန်ခဲကို enchilada တစ်ခုစီတွင်ဖြန်းသည်။ ၀ န်ထမ်းအတွက်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သော taco toppings များကို - ချဉ်သောမုန့်၊ ဂွမ်ကလာ , ငံပြာရည် , ဒါမှမဟုတ်ကုန်တယ်အစိမ်းရောင်ငရုတ်သီး!
နံနက်စာ Enchiladas ပြုလုပ်နည်း
tortillas များကိုဟင်းသီးဟင်းရွက်အရောအနှောဖြင့်လှိမ့်ပါ၊ ဒိန်ခဲထည့်ပါ၊ casserole ပန်းကန်ထဲထည့်ပါ။
နံနက်ယံ၌လုပ်ဖို့ကျန်သမျှသောမီးဖို preheat နှင့်မုန့်ဖုတ်အချိန်အလယ်၌ဒိန်ခဲ၏ကျန်ရှိသောဖြည့်စွက်ခြင်း, နံနက်စာ casserole မုန့်သည်! ပူ၊ ပူဖောင်း၊ အချိုမှုန့်၊ သစ်သီး Yumminess!
တစ် crock အိုးထဲမှာ swiss ကင်
အကောင်းဆုံးနံနက်စာစားသုံးခြင်း Casserole အတွက်သိကောင်းစရာများ
ဤစာရွက်၏မှော်အတတ်၏အစိတ်အပိုင်းမှာအရသာများသည်အရည်ပျော်ရန်အခွင့်အလမ်းရှိသည်။ Tortillas သည်ကြက်ဥအရောအနှောတွင်စိမ်ထားခြင်းနှင့်မုန့်ဖုတ်စဉ်အတွင်းသဘာ ၀ ကျသောပေါင်းစပ်မှုအနည်းငယ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။
ကျန်ရှိသောပစ္စည်းများကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင် ၂-၃ ရက် ထား၍ သိုလှောင်ပြီးမီးဖို (သို့) မိုက်ကရိုဝေ့ဗ်တွင်ပြန်လည်သိုလှောင်နိုင်သည်။ အကြိုက်ဆုံး toppings များနှင့်လန်းဆန်းစေပြီးတစ်ပတ်တာ၏ကြည်နူးဖွယ်နံနက်စာအတွက်ထောပတ်နှင့်အတူထူသောပေါင်မုန့်ကင်နှင့်အတူဝတ်ပြုပါ။
ဘလူးဘယ်ရီ pancakes - ဂန္အကြိုက်ဆုံး
Hashbrown နံနက်စာ Casserole - ချစ်ဘွယ်သောလက္ခဏာ & cheesy
ဒိန်ခဲနံနက်စာပီဇာ - ရှေ့ဆက်လုပ်ပါ
Ham & ဟင်းနုနွယ်ရွက် Omelette - ကျန်းမာသန်စွမ်းလွယ်ကူသည်
ဘလူးဘယ်ရီပြင်သစ် Toast မုန့်ဖုတ် - creamy custard နှင့်အတူ
နံနက်စာ Tacos - မိသားစုအကြိုက်ဆုံး
ဒီမနက်စာ Enchiladas ကိုသင်နှစ်သက်ပါသလား အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့်မှတ်ချက်ထွက်ရန်သေချာစေပါ။
ပြင်ဆင်ချိန်ဆယ့်ငါး မိနစ်များ ချက်ပြုတ်ချိန်၁ နာရီ ရေခဲသေတ္တာ၁၂ နာရီ စုစုပေါင်းအချိန်၁၃ နာရီ ဆယ့်ငါး မိနစ်များ ဝန်ဆောင်မှု၈ ကဗျာ စာရေးသူHolly Nilsson ဤနံနက်စာ Enchiladas သည်ဆာလောင်မွတ်သိပ်နေသောလူအုပ်ကိုရှေ့သို့တက်လှမ်းရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ပုံနှိပ်ပါ ပင်
▢နှစ် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း သံလွင်ဆီ
▢၁ ကြက်သွန်နီ ကုန်တယ်
▢½ အနီရောင်ခေါင်းလောင်းငရုတ်ကောင်း ထုထည်
▢½ ငရုတ်ကောင်းစိမ်း ထုထည်
▢နှစ် ခွက် ဝက်ပေါင်ခြောက် အရက်
▢၈ ကဗျာ ၈ ယောက်စီ
▢နှစ် ခွက် cheddar ဒိန်ခဲ ဖျက်စီးခွဲခြား
▢နှစ် ခွက် နို့
▢၁ ဇွန်း ဂျုံမှုန့်
▢½ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း oregano
▢3-4 dash ငံပြာရည် ထိုကဲ့သို့သော Tobasco အဖြစ်
ကြက်သွန်၊ ကြက်သွန်ဖြူနှင့်ငရုတ်ကောင်းတို့ကိုအလယ်အလတ်အပူဖြင့်နူးညံ့သည့်အထိချက်ပြုတ်ပြီး ၅ မိနစ်ခန့်ချက်ပြုတ်ပါ။ ဝက်ပေါင်ခြောက်ထဲမှာမွှေပါ။
tortilla အဆုံးတွင်ဝက်ပေါင်ခြောက် and ခွက်နှင့်ဒိန်ခဲ ၃ ဇွန်းချထားပါ။ တက်လှိမ့်ခြင်းနှင့်ပြင်ဆင်ထားဒယ်အိုးထဲမှာချုပ်ရိုးအခြမ်းထားပါ။ ကျန်ရှိသော tortillas နှင့်အတူထပ်လုပ်ပါ။
အရသာအတွက်ဥ၊ နို့၊ ဂျုံမှုန့်၊ oregano၊ ငံပြာရည်၊ tortillas ကျော်လောင်း။ သတ္တုပါးနှင့်အအေးခံ။ တစ်ညလုံးဖုံးအုပ်ထားပါ။
350 ° F မှမီးဖို Preheat ။ မီးဖို preheats နေစဉ်, မိနစ် 20 ခန့်ရေခဲသေတ္တာထဲကဒယ်အိုးဖယ်ရှားပါ။
မုန့်ဖုတ် 35 မိနစ်ခန့်ဖုံးလွှမ်းကြ၏။ ကျန်ရှိသောဒိန်ခဲနှင့်အတူသတ္တုပါးနှင့်ထိပ်တန်းဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ နောက်ထပ် ၁၅ မိနစ်မှ ၂၀ မိနစ်အထိကြက်ဥများကိုမွှေပါ။ ဆန္ဒရှိသည့်အတိုင်းချဉ်သောမုန့်, ​​ဆာဆာနှင့် toppings နှင့်အတူအမှုတော်ကိုထမ်းရွက်။
ကျန်ရှိသောပစ္စည်းများကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင်သုံးရက်အထိသိမ်းထားပါ။ အပူကိုမကုန်မှီတိုင်အောင်မိုက်ကရိုဝေ့ (ပ်) တွင်အပူပေးပြီးဒိန်ခဲ၊ ဆား၊ ငရုတ်ကောင်းနှင့်အတူလန်းဆန်းစေသည်။
သော့ချက်စာလုံးအကောင်းဆုံးမနက်စာ enchiladas, မနက်စာ enchiladas, မနက်စာ enchiladas စာရွက်, မနက်စာ enchiladas အောင်ဘယ်လို သင်တန်းနံနက်စာ၊ Casserole ချက်ပြုတ်ခဲ့သည်အမေရိကန်© SpendWithPennies.com ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများနှင့်ဓာတ်ပုံများသည်မူပိုင်ခွင့်နှင့်ကာကွယ်ထားသည်။ ဤစာရွက်ကိုမျှဝေခြင်းကိုအားပေးပြီးတန်ဖိုးထားသည်။ မည်သည့်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုမဆိုချက်ချင်းကူးယူခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ကူးယူခြင်းများကိုလုံးဝတားမြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံအသုံးပြုမှုမူဝါဒကိုဒီမှာကြည့်ပါ ။